इन्द्रेणीमा कृष्ण र रुपालाई पैसाको बिटो ,हस्तान्तरण गर्न पुगे पूर्व-मन्त्री ! (भिडियो) - Sabal Post
इन्द्रेणीमा कृष्ण र रुपालाई पैसाको बिटो ,हस्तान्तरण गर्न पुगे पूर्व-मन्त्री ! (भिडियो)
ऋषिराम खड्का असोज तिर हो घर विदामा गएको थियो ढिलोगरी कृष्ण भाईलाई करेन्ट लागेर नाजुक अवस्थाबाट बाँचेको खबर बिमला दिदिले सुनाउनु भएको थियो । त्यतिबेला नै मैले भने दिदि अहिले सामाजिक सञ्जालले धेरैको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ । यो कुरा मिडियामा लैजाउँ मनकारी नेपालीको कमि छैन ।
त्यसैबिचमा नयाँ नयाँ न्युज नेपालका शिशिर भण्डारीसँग यो विषयमा कुरा गरेँ ! सर मेरो एकजना आफन्तको यस्तो हालत छ एउटा भिडियो बनाएर युट्युबमा राख्दिनु पर्यो । समाजसेवी भण्डारीले मेरो कुरा नकारेनन मेरो काम नै त्यहिँ हो सर म जान्छु भन्नुभयो ।
मेरो चाहना त्यति थियो रुपा र कृष्णको पिडा सबैले थाहा पाउन । तर आज कृष्ण र रुपा भन्दा पनि म धेरै खुशी छु । अहिले जे भईरहेको छ जसरी सिंगै नेपाल उर्लेको छ सबै कुराको जस जजस्ले लिए पनि गर्वका साथ भन्नु सक्छु त्यसको सुरुवात मैले नै गरेको हुँ ! व्यक्त गर्ने शब्द छैनन । नेपालीको जस्तो ठुलो मन भएका मानीस संसारमा कहाँ भेटिएलान ?
उपहार र सजावटका लागि प्रयोग हुने मुकुण्डोको…
स्वास्थ को हिसाबले दहि राम्रो कि दुध…
विभिन्न मागसहित अभिभावकसंघद्धारा सामाजिक विकास मन्त्रिलाई ज्ञापनपत्र
भारतमा लोकसभा निर्वाचनः प्रधानमन्त्रीमा फेरि पनि नरेन्द्र…
हरिवोधनी एकादशीको अवसरमा गुल्मीको धार्मिक स्थल रेसुङ्गामा…